Ahafahan’ireo Rosiana nosamborina nandritra ny fihetsiketsehana hangataka fanampiana ara-pitsarana ny roboton-karajia (Chat bot) · Global Voices teny Malagasy
Ahafahan'ireo Rosiana nosamborina nandritra ny fihetsiketsehana hangataka fanampiana ara-pitsarana ny roboton-karajia (Chat bot)
Voadika ny 03 Oktobra 2018 4:44 GMT
Vakio amin'ny teny русский, English, Italiano, Español, Français, English
“Vola fanampiana ho an'ny velona!”: Manohitra ny fanavaozana ny vola fanampiana ny Rosiana. Sary avy amin'i Andrew.Filin avy amin'ny Wikimedia Commons (CC 1.0)
Raha nidina an-dalambe tamin'ny 9 Septambra ireo Rosiana mba hanohitra ny tolo-kevitra fanavaozana ny vola fanampiana, olona 1200 teo ho eo no nosamborina tao amin'ny tanàna 38. Hita midaroka mpanao fihetsiketsehana amin'ny tranga maromaro tratra tamin'ny fakantsary ireo polisy manampahefana.
Androm-pifidianana mpanao lalàna ara-paritra sy ben'ny tanàna ao Moskoa ihany koa ny 9 Septambra, izay mety manazava amin'ny ampahany ny hetsika tafahoatra, mahery vaika nataon'ny mpitandro ny filaminana nandritra ny fihetsiketsehana.
Nandritra ny fihetsiketsehana sy nandritra ireo andro nanaraka, nanangona sy nanaparitaka vaovao momba ny fisamborana sy ny herisetran'ny mpitandro filaminana ny fikambanana tsy miankina Rosiana OVD-Info. Nanome fanampiana ara-pitsarana ihany koa ny vondrona, miaraka amin'ny laharana an-tariby fanampiana 24 ora – ary ny chat bot mandeha ho azy.
Named for the Russian acronym for “law enforcement agencies” (OVD), OVD-Info works to gather information on all forms of politically-motivated arrests and prosecutions. OVD-Info describes its mission and activities as follows:
Momba ny OVD-Info
Nomena anarana tamin'ny fanafohezan-teny Rosiana “sampan'ny fampiharan-dalàna” (OVD), ny OVD-Info dia miasa mba hanangonana vaovao momba ireo endrika fisamborana sy fanenjehana amin'ny endrika ara-politika rehetra. Mamariparitra ny iraka ataony sy ny asa ataony toy izao ny OVD-Info:
Ny OVD-Info dia tetikasa fampahalalam-baovao mahaleo tena momba ny fiarovana ny zon'olombelona manoloana ny famoretana ara-politika any Rosia. Miaraka amin'ny fanampiana amin'ny antso an-tariby, manangona vaovao momba ireo fisamborana amin'ny hetsi-bahoaka sy izay endrika fanenjehana ara-politika hafa izahay, ary mamoaka vaovao sy mandrindra ny fanampiana ara-pitsarana ho an'ireo voafonja. Mety ho fakàn-kevitra an-telefaona izany, na mandefa mpisolovava any amin'ny sampan'ny fampiharan-dalàna, manampy ao amin'ny fitsarana Rosiana sy mandritra ny fitsarana ambony, ary farany, mametraka fitarainana any amin'ny Fitsarana Eoropeana Momba ny Zon'olombelona … Tsy manohana fironana ara-politika manokana izahay ary miaro ny vahoaka na inona na inona ny fomba fijeriny ara-politika na fomba fijerinay ara-politika.
Malaza be any Rosia ny fampiharana finday antsoina hoe Telegram, noho izany dia nanapa-kevitra ny hampiasa ity fitaovana ity ho toy ny fomba hafa hanampiana ireo mpanao fihetsiketsehana hiaro ny zon'izy ireo ny OVD-Info. Ankoatra ny fandefasan-kafatra tsy miankina azo antoka, ny Telegram dia ahafahan'ny mpampiasa azy manaraka “fantsona” azon'ny daholobe hidirana ary mifanaraka amin'ny tombontsoany, izay mety ho zavatra avy amin'ny politika, vazivazy sy pôrnôgrafia. Afaka mamolavola roboto ihany koa ireo mpiserasera ahafahana mifandray amin'ireo mpiserasera hafa amin'ny fantsona, na amin'ny fototra tsirairay.
Vao haingana ny OVD-Info no namolavola roboto manokanab Telegram izay ahafahan'ny mpiserasera mitatitra an-tsitrapo ny fisamborana azy ireo sy izay fifandraisana hafa amin'ny mpitandro ny filaminana. Raha vao mifandray amin'ny roboto, mailaka avy hatrany ny mpiserasera mizara ny anaran'izy ireo sy ny laharana an-tariby ary alefa ny karajia afenina an-tsoratra
Vantany vao misy tatitra momba ny fisamborana, dia miezaka manaraka izay mitranga amin'ny mpiserasera ny OVD-Info. Amin'ny alalan'ny roboto, afaka mahazo toro-hevitra momba ny zavatra tokony hataony aorian'ny fisamborana azy ny mpiserasera, ary koa izay lalàna tokony hambara rehefa miresaka amin'ny manampahefan'ny fampiharana ny lalàna. Azo ampiasaina handefasana hafatra any amin'ny ekipa OVD-Info ihany koa izany raha ilaina.
Na dia mety ho sarotra aza ny mieritreritra fa afaka miditra amin'ny findainao mandritra sy aorian'ny fisamborana, tsy ny fisamborana rehetra nandritra ny hetsi-panoherana vao haingana no mahery setra tanteraka na mampahonena tahaka ireo daroka sasany hita amin'ny lahatsary. Indraindray, tonga fotsiny any anaty fiara fitateram-bahoaka ny polisy ary nangataka tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana mba hiditra ao. Nisy ireo olona afaka naka selfies sy lahatsary tao anatin'ny fiara fitateram-bahoaka. Nanjary marika fanomezam-boninahitra teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny fakàna sy fizarana selfies ao ambadiky ny fiaran'ny polisy.
Pikantsarin'ny OVD-Info-Bot ahitana ireo safidy maromaro fandefasan-kafatra mandeha ho azy, toy ny “navotsotra aho” sy ny “Midaroka / mandrahona ahy izy ireo”.
Azo antoka tanteraka ve ireo fifandraisana ireo? Sarotra ny manamarina izany. Na dia mirehareha amin'ny fandefasan-kafatra voaaro aza ny Telegram izay manome antoka fa ireo mpandefa hafatra sy ny andefasana izany ihany no afaka mamaky ny hafatra, dia naneho ny ahiahiny mikasika ny fenitra fanafenan-tsoratra sy ny endrika fiarovana hafa ny Telegram kosa ireo mpahay teknolojia sy mpikatroka .
Raha sendra olana ireo mpifandray eo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny OVD-Info, mety hahatonga ireo mpikatroka hiharan'ny fanarahamaso bebe kokoa sy famoretana ataon'ny fanjakana izany. Vao haingana ihany koa ny Telegram no nanavao ny politikany momba ny tsiambaratelo mba hahafahana manao fizaram-baovaon'ny mpiserasera amin'ny manampahefana mandritra ny tranga fampihorohoroana, fitsipika izay mety ho araraotin'ny manampahefana Rosiana mora foana, izay fantatra amin'ny fanararaotana ny fampiharana ny lalàna mikasika ny hetsika extremista sy fampihorohoroana mifandraika amin'ny lahatsoratra ao amin'ny media sosialy.
Na dia tsy nanaporofo aza ny Telegram fa manana fampiharana fandefasan-kafatra azo antoka indrindra eny an-tsena, izy no fampiharana finday malaza indrindra any Rosia izay manome fepetra voaaro ao amin'io sehatra io, ka mahatonga azy ho safidy matanjaka ho an'ny FTMF na ONG mikasa hanohana mpanao fihetsiketsehana an'arivony maro.
Nandritra ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Global Voices, Boris Beilinson, mpandrindra ny aterineto sady mpandrindra ny OVD-Info, nanazava ny fomba fiasan'ny roboto sy ny fomba nampiasana azy tamin'ny Alahady lasa teo.
Global Voices (GV): Ity ve no fotoana voalohany nampiasan'ny OVD-Info ity karazana roboto ity?
Boris Beilinson (BB): Tsia, navoaka talohan'ny fihetsiketsehana tamin'ny 12 Jiona 2017 [fihetsiketsehana iadiana amin'ny kolikoly manerana an'i Rosia] ny roboto.
GV: Inona no nitarika ny fanapahan-kevitra hamolavola ity roboto ity fa tsy miankina fotsiny amin'ny fomba hafa toy ny hotline, hafatra manokana ao amin'ny VKontakte, sy ny sisa?
BB: Tsy nitsahatra nampiasa ireo fomba fifandraisana taloha izahay, anisan'izany ny lehibe indrindra, ny hotline. Saingy tianay ny hanamaivana ny enta-mavesatra eo amin'ny hotline, satria mandritra ny androm-pihetsiketsehana goavambe, sarotra ny manao antso an-tariby marobe, ka ny karajia (chat) no mety kokoa. Ankehitriny dia maro amin'ireo fifandraisantsika amin'ny aterineto no mitranga amin'ny roboto, ary niato kely ny hotline. Tsy ny fomba fiasa ara-teknika fotsiny no tianay, fa raha ny fomba fijerinay, Telegram no fomba fifandraisana azo antoka indrindra ampiasainay. Matoky azy izahay ary mino fa amin'ny alalan'ny roboto, afaka miresaka momba ireo zavatra izay tsy tsara resahana amin'ny finday isika
GV: Firy ny olona nizara ny vaovao momba ny fifandraisany talohan'ny hetsi-panoherana tamin'ny alahady?
BB: Hatramin'izao, dia olona 16.002 no nifandray tamin'ny roboto, ka 8.185 no nametraka ny fifandraisany sy nahazo fidirana tamin'ny fomba fiasany voalohany.
GV: Firy tamin'izy ireo no nitatitra ny fisamborana azy tamin'ny alalan'ny roboto?
BB: Tsy marobe, 184 (ny ankamaroan'izy ireo dia nanomboka niresaka tamin'ny roboto tamin'io andro io mba hitatitra ny fisamborana azy ireo).
GV: Mihevitra ve ianao fa nahomby ny roboto? Misy fomba hafa tianao hampiana ve?
BB: Raha jerena ny ezaka natao tamin'ny famoronana, dia tena fahombiazana izany. Anisan'ireo famantarana ny fahombiazana ny fitomboan'ny olana: sarotra ny mitantana ny firongatry ny hafatra amin'ny fomba taloha, ka tsy maintsy namolavola fomba fitantanana manokana izahay. Mazava ho azy, te-hampivelatra fomba fiasa hafa ho an'ny mpiserasera ihany koa izahay. Ambonin'izany, dia hampidirina ny torolàlana ho an'ny fiarovana mandritra ny fitsarana; Indrisy, tsy mifarana amin'ny fisamborana ny famoretana mpanao fihetsiketsehana ao amin'ny firenenay.